Sumadaha shahaadadda waxbarasho ee saxda ah (Authenticated certificates) looga baahanyahy......W/Q Dr Bilaal Axmed Cige
Sunday September 05, 2021 - 17:54:22 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Burburkii dawladnimada Soomaalida, saaxadda kama ay bixin uun nidaamkeedi balse waxaa raacay dhidibadii adkaa sida waxbarashada oo maanta noqotay mid ganacsi, inteeda badana dad gaar ah (Private sectors) oo aan ehel u ahayn gacanta u gashay. Tacliinta sare ee heer jaamacadeed dunida waxa ay ka mid tahay arrimaha xilka weyn la iska saaray ilaalinteeda, balse arrinku wuu ka duwanyahy marka ay noqoto deegaannada Soomaalida gaar ahaanna Somaliland oo aan inteeda badan xog-ogaal u ahay.
Haddaba maanta marka laga yimaado tayo xumada qaar kamid ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay, waxa aynu ka hadlaynaa arrinta shahaadadda oo dhalliilo badan leh. Sumadaha saxda ah ee loo baahanyahay shahaado jaamacadeed in ay yeelato intooda ugu muhiimsan ayaan soo koobayaa:-
1. Serial number: Sumada kala horraynta tirada ama xidhiidh-tiraha, sumadan waa mid ay waajib tahay shahaadaddu in ay yeelato. Waa mid tixraac u samaynaysa shahaado kasta oo jaamacaddu bixiso, haddii wakhti kale loo baahdana, sida ardaygu marka uu shahaadadda qaato in uu waxbarasho kale doonto, jaamacadda uu waxbarashadda ka soo codsaday waxa ay tixraac ku samaynaysaa in sumada kala horaynta tirada ama xidhiidh-tiruhu (Serial Number) sax tahay oo aanay been abuur ahayn (Fake). Waa astaan cadaynaysa shaahadaddaas in ay ka soo baxday jaamacad nidaam leh.
2. Dry stamps: Shaanbadda qallalan. Waa sumad kale oo muhim u ah shahaadadda jaamacadda ama machad aqoon bixinaya, calaamaddan waxa ay meesha ka saaraysaa shahaadaddu in ay tahay macmal oo qofku suuqa madow ku samaystay. Sumaddan inta badan waxaa leh shahaadooyinka saxda ah ee ka soo baxay goobaha waxbarasho ee adag. Hadii shahaadaddu aanay lahayn shaanbada qallalan ma aha mid la isku hallayn karo xaqiiqadeeda.
3. Saxeexa: Arrinta saxeexa way ku kala duwanyihiin jaamacaduhu, marba xafiiska ugu awoodda badan ayaa lagu duugaa saxeeexiisa. Intooda badan waxaad arkaysa iyagoo wata saxeexa xafiisyada ; diiwaangalinta(Registration office), xafiiska gudoomiyaha Jaamacadda iyo xafiiska imtixaanaadka.
Qoraalkan qeybta 2aad waxa aynu kaga hadlaynaa jaamacadaha bixiya shahaadoyinka aan lahayn qodobadan muhimka ah, kuwaas oo lug-gooyo ku ah ardayda wax ka barata iyo bulshadaba.